कञ्चनपुर आन्दोलन: ‘पैसा लिन गएको छोरा फर्किएन’- सुदुरपश्चिम - कान्तिपुर समाचार
कञ्चनपुर आन्दोलन: ‘पैसा लिन गएको छोरा फर्किएन’
प्रहरीको गोलीले मारिएका शनि खुनाको आइतबार सम्मानका साथ महाकाली नदीमा दाहसंस्कार गरिएको छ
भाद्र ११, २०७५ भवानी भट्ट
कञ्चनपुर — भीमदत्त–१८ भगतपुरका १४ वर्षीय शनि खुना शुक्रबार दिनभरि घरमै थिए । उनी घरमा मार्बल लगाउने मिस्त्रीको काम गर्थे ।
प्रहरीको गोलीले मारिएका किशोर शनि खुनाका आमा र दिदीबहिनी । तस्बिर : भवानी
किशोरीको बलात्कारपछि हत्या गरिएको घटनाविरुद्ध महेन्द्रनगरमा चर्किएको आन्दोलनले काम प्रभावित भएपछि घरमै बसेका थिए ।
साँझपख दाई उमेश (ठूलो बुवाको छोरा) सँगै भीमदत्त नगरपालिकाकै भासीमा रहेका ठेकेदारसँग पैसा माग्न निस्किए । रकम लिएर घर फर्किन लाग्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि प्रदर्शन भइरहेको थियो । त्यही बेला प्रहरीले चलाएको गोली लागेर शनि त्यहीं ढले ।
‘दिनभरि घरमै थियो, साँझ पैसा मागेर ल्याउँछु भनेर गएको हो तर घर फर्किएन,’ शनिकी कान्छी आमा मञ्जुले भनिन्, ‘त्यहि मजदुरीको पैसा उसका लागि काल बनेको रहेछ ।’
शनिले घर नजिकैको मदन भण्डारी प्राविमा ३ कक्षा पढ्दापढ्दै स्कुल छाडेपछि मार्बल लगाउने काम सिकेका हुन् । पढाइमा ध्यान नदिए पनि उनी घरपरिवारको पीडा बुझ्ने र निकै समझदार रहेको मञ्जु बताउँछिन् । घर फर्किने बेला शनिका दाइ उमेश पनि सँगै थिए । प्रहरीले ताक्दा शनिले आफू आन्दोलनकारी नभएको र काम गरेको रकम मागेर फर्किरहेको जानकारी गराउँदा पनि नछाडेको मञ्जुले बताइन् ।
‘म आन्दोलनकारी होइन भनिरहेको थियो,’ उमेशले भनाइ उद्धृत गर्दै मञ्जुले भनिन्, ‘तर प्रहरीले छाडेन, गोली हानेर ढलायो ।’ शनि डेढ वर्षको छँदा उनकी आमा मायाको मृत्यु भएको थियो । उनका बुवा वीरबहादुरले मञ्जुलाई भित्र्याएका हुन् । सौतेनी आमा भए पनि उनले शनिप्रति कहिल्यै नराम्रो व्यवहार गरेकी थिइनन् । आफ्नै छोरासरह मानेकी थिइन् । ‘आफ्नो छोराभन्दा बढी माया गर्थें, आज छाडेर गयो,’ उनले भनिन्, ‘आमाले सानैमा छाडेर गएपछि मैले नै पालेर हुर्काएकी हुँ ।’ उनको पारिवारिक अवस्था निकै कमजोर छ । बुवा वीरबहादुर भीमदत्त नगरपालिकाको सरसफाइ शाखाका कर्मचारी हुन् । आमा पनि यहीँको एक मन्टेस्वरीमा खाना पकाउने काम गर्छिन् ।
जमिनका नाममा भूमिसुधार कार्यालयले उपलब्ध गराएको ४ धुर मात्रै छ । ‘ज्याला मजदुरी गरेर परिवारको गुजारा चलाएका छौं,’ मञ्जुले भनिन् । शनिका २ दिदी र १ भाइ छन् । शुक्रबार साँझ जिल्ला प्रशासन कार्यालयअगाडि प्रहरीले चलाएको गोली लागेर मृत्यु भएका खुनाको आइतबार सम्मानका साथ महाकाली नदीमा दाहसंस्कार गरिएको छ ।
सरकारले उनलाई सहिद घोषणा गरेसँगै परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ । मृतकका परिवार भने सरकारले घोषणा गरेर मात्रै नहुने र व्यवहारमा पनि देखाउनुपर्ने बताउँछन् ।
शनिका नाममा स्मारक निर्माणसँगै सम्झनलायक कामहरू गर्नुपर्ने उनीहरू बताउँछन् ।
प्रकाशित : भाद्र ११, २०७५ १०:००
खोई सहुलियतको चामल ?
प्रदेश ७ का पहाडी जिल्लाका स्थानीय गौरा पर्बको मुखैमा चामल अभाव खेपिरहेका छन्
धनगढी — प्रदेश ७ को प्रमुख चाड गौराको मुखैमा चामल अभाव भएको छ । प्रदेशका ७ पहाडी जिल्लामा सरकारले अनुदान दिएको वार्षिक कोटाको चामलसमेत ढुवानी हुन नसकेको हो ।
‘सरकारको ढुवानी अनुदानको चामल ५/१० रुपैयाँ सस्तोमा पाइन्थ्यो,’ डडेल्धुराको दुर्गम नेउली गाउँका खेमसिंह ऐरले भने, ‘विपन्न परिवारलाई त्यसले ठूलो राहत पुग्थ्यो । तर, अहिले सहुलियतको चामल कहाँ पाउनु ।’
संस्थानको चामल कुन बेला आइपुग्छ ? कहिले सकिन्छ भन्ने कुरा सर्वसाधारणले पत्तो नै पाउन नसक्ने गरेको उनको गुनासो छ ।
ऐरले खाद्य संस्थानको चामल नपाएकै कारण सस्तोमा किन्न आफू धनगढी पुगेको बताए । प्रदेश ७ मा चाडपर्वको सिजन सुरु भइसकेको छ ।
यहाका बासिन्दाले दसैं–तिहारलाई जत्तिकै महत्त्व दिएर गौरा पर्व मनाउँछन् । त्यसपछि स्थानीय मठ–मन्दिरहरूमा दिवा जात्रा लाग्छ । तर, चाडपर्वकै मुखमा चामल अभाव भएपछि स्थानीय आत्तिएका छन् ।
उनका अनुसार यहाँबाट चामल लैजाने ब््व्यापारीले गाउँबजारमा दोब्बर मूल्य लिन्छन् । त्यसैले आफू धनगढीबाटै चामललगायत उपभोग्य सामग्री लिन आएको उनले बताए । नेपाल खाद्य संस्थानको क्षेत्रीय कार्यालय धनगढीबाट प्रदेश ७ का खाद्य संकट हुने जिल्लामा वार्षिक कोटा निर्धारण गरी चामल आपूर्ति गरिन्छ ।
क्षेत्रीय कार्यालयका प्रबन्धक प्रेमनरायण भण्डारीले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ कोका लागि छुट्टयाएको अनुदानको वार्षिक कोटा असोजको दोस्रो सातासम्म ढुवानी गर्न नसकिने बताए । ‘पहाडमा यतिबेला चाडबाड सुरु भएकाले चामलको आवश्यकता छ,’ उनले भने, ‘चामल ढुवानी टेन्डर प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेकाले चाँडो पठाउन मुस्किल छ ।’ उनले ढुवानी टेन्डर आह्वानपछि ठेक्का स्वीकृत हुने क्रममा रहेको बताए ।
बैतडी मेलौलीका वीरबहादुर नायकले दसैं तिहारमा पाखो धानलगायत बालीसमेत पाकिसक्ने बताए । ‘बर्खाको समयमा खाद्यान्न संकट हुने गरेको छ,’ उनले भने, ‘यही बेला सुदूरपश्चिमेलीको गौरालगायत चाडबाडका दिन सुरु भएका छन् ।
चाहिने बेला सरकारले चामल पुगाउँदैन । नचाहिने बेला प्रशस्त हुने गरेको छ ।’ उनले मेलौलीमा खाद्य संस्थानको चामल ढुवानी गर्ने ठेकेदारहरूले स्थानीय व्यापारीलाई बेचेर जाने गरेको आरोप लगाए  । संस्थानको चामल स्थानीयले सिधै पाउन नसक्ने गुनासो गरे ।
संस्थानको क्षेत्रीय कार्यालयबाट प्रदेश ७ का ७ वटै पहाडी जिल्लाको खाद्य डिपो, वितरण केन्द्र र शाखाका लागि ढुवानी ठेक्का समझौता हुने गरेको छ । यहाँबाट बाजुराको मार्तडी, कोल्टी, कवाडी, अछामको मंगलसेन, कमलबजार, विनायक र डडेल्धुरास्थित सदरमुकाम शाखाका लागि चामल पठाइन्छ ।
यस्तै बझाङ शाखा, बिसौना र काडा डिपो, दार्चुलाको खण्डेश्वरी, पारिबगर र सुनसेरा तथा बैतडीको पुचौडी हाट, मेलौली र कुलाउ क्षेत्रका लागि वार्षिक कोटा निर्धारण गरी ढुवानी अनुदानको चामल पठाउने गरेको क्षेत्रीय प्रमुख भण्डारीले बताए । उनका अनुसार ती सबै स्थानमा वार्षिक ५० हजार मेट्रिक टन कोटा निर्धारण गरिएको छ ।
प्रकाशित : भाद्र ११, २०७५ ०९:५९